मर्जरको नीति सफल रूपमा अघि वढेको छ - Karobar National Economic Daily
मर्जरको नीति सफल रूपमा अघि वढेको छ
query_builderJuly 2, 2017 1:44 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1081
विश्वमोहन अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ओम डेभलपमेन्ट बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीतिअनुरूप पछिल्लो समयमा मर्जरको लहर नै चलेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७२ सालको मौद्रित नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे ।
सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थाको ध्यान भनेको केन्द्रीय बैंकले तोकेको पुँजी पु¥याउनमा छ । हालको ओम डेभलपमेन्ट बैंक पनि ३ संस्थाको एक भएर बनेको हो । तत्कालीन सिटि डेभलपमेन्ट बैंक ओम फाइनान्ससँग मर्जर भएपछि बनेको ओम डेभलपमेन्ट बैंक केही समयअघि मनास्लु विकास बैंकसँग मर्जर भएको छ ।
बैंकको २ पटकसम्मको मर्जर गराएर ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्व सम्हालेका विश्वमोहन अधिकारी अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक पनि हुन् । २०३२ सालदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारीले व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । मर्जरपछिका चुनौती र समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थामा विषयमा अधिकारीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीः
मर्जरपछि संस्थाको नेतृत्व सम्हालेर अघि बढाउन कत्तिको सहज हँुदो रहेछ ?
ओम डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो यो दोस्रो मर्जर हो । यसभन्दा अघि सिटि डेभलपमेन्ट बैंकलाई ओम फाइनान्समा मर्जर गरेका थियौं । मर्जर भनेको फरक संस्कार भएका संस्थालाई एकीकृत गर्नु हो । फरक कल्चर मर्जर हँुदा चुनौती त हुन्छ नै ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मर्जर गरेर वित्तीय संस्था घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीति सफल रूपमा अघि वढेको छ । मर्जरमा सञ्चालक, व्यवस्थान र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि चुनौती हुन्छ । त्यसका साथै संस्थाअनुसार फरक रहेको व्यवसायलाइ पनि एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मर्जर गर्नु गराउनु भनेको चूनौतीपूर्ण काम हो । चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा सफलता हात पर्छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी २ अर्ब ५० करोड पु-याउने योजना कहाँ पुग्यो?
पुँजी वृद्धि प्रक्रिया जारी छ । पुँजी वृद्धिका लागि अब मर्जरमा जाने सोच छैन । हामीले कायम रेहका सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । त्यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको नाफबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि बैंकको पुँजी २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेर बैंकिङ सेवा दिँदा यो असरको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा बैंकिङ सेवा उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिर फरक हुने होइन । वित्तीय सेवा विश्वव्यापीकरण भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा आएको कर्जायोग्य रकमको अभाव उपत्यकाका बैंकलाई मात्र आएको होइन ।
समग्र प्रणालीमा समस्या आएपछि हामीलाई नपर्ने भन्ने हुँदैन । यो समस्या अहिले पनि छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरू सबैले आफ्नो जिम्मेवारी उपयुक्त ढंगबाट निर्वाह गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ । सरकाले बजेट खर्च बढाएर केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात र नगद सञ्चिती अनुपातमा केही लचकता अपनाएको खण्डमा समाधान हुने देखिन्छ ।
यसमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी मात्र पनि हुनु हँुदैन । यो समस्या समाधानका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्छ । हाल कर्जायोग्य रकम अभावका कारणले व्याजदर पनि बढेको छ, यो घट्नुपर्छ । तर, नीति निर्माताले एक करोड ६५ लाख सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई मध्यनजर नगरी ११ लाख ऋणीको हितमा हेर्नु उपयुक्त होइन ।
मर्जरपछि संयुक्त कारोबार सुरु गर्नुभएको छ । बैंकको नयाँ योजना के छ ?
करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भएका हौं । अगामी वर्षमा हामीले काठमाडौंमा पनि उपस्थिति देखाउँछौं । हाल पनि काठमाडांैमा शाखाहरू भए पनि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा लैजान हतार नगरेको हो । हालको हाम्रो व्यवसायमा काठमाडौंमा धेरै योगदान रहेको छ । राष्ट्रियस्तरको बैंक भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा उपस्थिति नभएको हुनाले नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने छ ।
अगामी दिनमा संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना छ । बैंकको आईटी प्रविधिमा सुधार गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने तथा बैंकको व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ । साथै संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई पनि उपयुक्त प्रतिफल दिएर अघि बढ्ने योजना रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगले जोखिम पनि बढेको छ ।
त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउने तथा समयसापेक्ष बनाउने योजना छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम छ भन्दैमा प्रविधि प्रयोग नगरेको खण्डमा विश्वव्यापी बजारमा हामी नै पछि पर्छौं । त्यसैले जोखिम कम गरेर अघि बढ्ने हो ।
बैंक राष्ट्र बैंक मर्जर